के तपाईले ज्यादा मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ, साबधान स्वास्थ्य जोखिममा हुनसक्छ | « BBCeonlinenews
के तपाईले ज्यादा मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ, साबधान स्वास्थ्य जोखिममा हुनसक्छ |
काठमाडौँ — सुन्दर देखिन मेकअप गरिन्छ । त्यही मेकअपले सौन्दर्य बिगार्छ भन्ने हेक्का प्रायः लाई छैन । छालाका विशेषज्ञ र विज्ञानका प्राध्यापकहरूका अनुसार सौन्दर्य प्रसाधनमा हुने रासायनिक तत्त्वले छालालाई बिगार्ने मात्रै होइन, क्यान्सरसम्मको रोग निम्त्याउन सक्छ ।
काठमाडौं सानेपाकी कल्पना न्यौपानेको गालामा फाउन्डेसनको प्रयोगले थुप्रै खाल्डा परेका छन् । हेटौंडाकी लक्ष्मी अर्यालले पनि कस्मेटिककै कारण आफूमा समस्या आएको भर्खरै थाहा पाएकी छन् ।
छाला रोग विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडा धेरै सौन्दर्य सामग्री प्रयोग गर्नेहरूकै छाला छिटो खराब हुने गरेको बताउँछन् । ‘अत्यधिक प्रयोग हुने फाउन्डेसन, लिपिस्टिक, अत्तर, नङ पालिसजस्ता कस्मेटिकमा लिड कम्पाउन्ड, पेग कम्पाउन्ड, फर्मल डिहाइड, प्याराबेन जस्ता रसायन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘छालामा प्रयोग गर्न हुने भनिए पनि यस्ता रसायनले शरीरमा विभिन्न रोग पैदा गर्छन् ।’ डा. खतिवडाका अनुसार नेपालमा कस्मेटिकको अधिक प्रयोग भएको डेढ दशकजति भयो । ‘त्यसैले धेरै पहिलेदेखि यसको प्रयोग हुँदै आएका देशमा जस्तो छालाको समस्या यहाँ देखा परिहालेको छैन,’ उनले भने, ‘छालासम्बन्धी रोग भने बढी देखिन थालेका छन् ।’ धेरैजसो सौन्दर्य सामग्रीमा प्रयोग हुने मानवीय कारसिनोजेनयुक्त फर्मलडिहाइडको त कत्ति पनि प्रयोग गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
डा. खतिवडाकहाँ उपचार गराउन दिनहुँ ५० देखि ७० जना चर्मरोगी पुग्छन् । प्रायः सबैमा कस्मेटिककै प्रयोगले समस्या भएको देखिएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार लिपस्टिकमा हुने लिड कम्पाउन्डबाट धेरैमा अनेक समस्या आएका छन् । लिड कम्पाउन्डको अधिक प्रयोगले रक्तचाप बढाउनुका साथै दिमाग र कलेजोमा समेत असर पार्छ । मोइस्चराइजर, स्याम्पु, फाउन्डेसनजस्ता सौन्दर्य सामग्रीमा पाइने पाराबेन्स कम्पाउन्डले महिलामा छातीको क्यान्सरसमेत हुने जोखिम बढाएको देखिएको छ । महिलाले सुन्दर हुन धेरै प्रयोग गर्ने अर्को रसायन हो, पोलिइथाइलिन ग्लाइकोल पेग । छाला नरम बनाउने भनिएका सबैखाले क्रिममा पाइने यो रसायनले चिडचिडाहट बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा अत्यधिक पाइने रङहीन र प्रज्वलनशील रसायन फर्मलडिहाइडले श्वासप्रश्वासमा सिधै असर गर्ने हुनाले दम रोग निम्तिने गरेको छ । यो रसायन प्रायः नङ पालिस, बडिलोसन, स्याम्पु इत्यादिमा प्रयोग हुने गरेको छ । सबैखाले सौन्दर्य सामग्रीमा पाइने रसायनल थ्यालेट्सले इन्डोक्राइन हार्मोनलाई नाश गरी छालालाई छिट्टै मृत बनाउनेछ ।
सौन्दर्य सामग्रीमा प्रायः प्रयोग हुने अल्कोहलले छालाको प्राकृतिक रङ हटाउँछ र विभिन्न एलर्जी पैदा गराउँछ । अल्कोहलले छालालाई प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान गर्ने तत्त्वलाई पनि विस्तारै हटाउने रसायनशास्त्रका प्राध्यापक अक्कल देव मिश्र बताउँछन् । ‘कस्मेटिकमा हुने रसायन छालामा पर्‍यो भने क्यान्सरसमेत हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘छालामा एलर्जी र सुक्खापन सबैजसो रसायनले गराउँछन् । यस्ता रसायनले वातावरणसमेत प्रदूषित गर्छ ।’ साभार कान्तिपुरबाट
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७५ ०९:१८